» Walaloo Du’a Dr. Sheik Muhammad Rashaad ---- Gadaa.com Oduu – News
Caamsaa/May 26, 2013 · Gadaa.com Kan barreesse: Najiib Zannuun*
Xiqquman dubbadhaa namuu haa dhagayuu Kan inni dhalate,kudha sagal soddomii afuritti
Laga Arbaati magaalaa muummittii Barnoota jalqabaa abbarraa baratee
Sheik Bakrii Saphaloo isas dabalatee Beekkumsa jajjabaa achirraa horate. Barnoota biyyatti erga bakkaan gahee
Gaafa san jalqaba biyyarraa kan bahe. Yaman tarkaanfatuun Su’udii dhaqee Lubnaaniif Masrittis garasumaan maqee
PHD isaa qorannoo afaaniin UK badhaafame. Gaafa afaan keenya dukkanatti qaban,
May 26, 2013 @ 11:32 pm
Rabbi rahmata haa godhuuf!!
Fuuli waaqaa itti haa tolu! Biyyeen haa salphattuuf abbaa qubee afaan oromoo Dr. M.rashaad
edaso ykn why Abubeker fcbook name said,
rabbiin rahamaataa isaaniif haa godhuu،isaan gamachisee janati furdoosii haa galchuu amiin nusii akkaa isaanittii ofiif ilmaan keenyaa jabeessui qabnaa.as wr wb
May 27, 2013 @ 11:52 pm
Galatoomi, Najiib keenya.
Sooressa keenya kana lubbuu isaanii Jannata haa godhuuf.
+ 8 = 11	Enter your search terms